Ibrahima Konate Oo Sharraxay Naanaystiisa 'Ibou' Iyo Culayska Uu Ku Yeelanayo Lambarka Ay Liverpool U Xidhay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaIbrahima Konate Oo Sharraxay Naanaystiisa ‘Ibou’ Iyo Culayska Uu Ku Yeelanayo Lambarka Ay Liverpool U Xidhay
Ibrahima Konate Oo Sharraxay Naanaystiisa ‘Ibou’ Iyo Culayska Uu Ku Yeelanayo Lambarka Ay Liverpool U Xidhay
July 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Ibrahima Konate ayaa qirtay in uu muhiim yahay lambarka uu u xidhanayo kooxdiisa cusub ee Liverpool, kaas oo uu ka dhaxlay kubbad-sameeyaha reer Netherlands ee Georginio Wijnaldum oo heshiis cusub ah ugu wareegay PSG.
Laacibkan oo ay Liveprool kala soo wareegtay RB Leipzig bishii May, iyadoo bixisay lacagtii lagu burburin karayay qandaraaskiisa, ayaa waxa loo dhiibay No.5 oo uu xidhan jiray Wijnaldum, kaas oo markii la guddoonsiiyey uu u dhigtay xaflad jacayl uu u qabo darteed.
22 jirkan ayaa tababarka la qaadanayay ciyaartoyda Liverpool tan iyo horraantii bishan, waxaanay iska garab muuqanayeen laacibiinta dhaawaca kasoo doogay.
Kulamada saaxiibtinimo ee Liverpool ku yeelanayso waddanka Austria ayaa uu Konate doorkiisa ka qaadan doonaa iyadoo ay ciyaartoyda iyo tababaruhuna ka caawin doonaan sidii uu ula qabsan lahaa qaab-ciyaareedka Liverpool.
Afarta ciyaarood ee FC Wacker Innsbruck, VfB Stuttgart, Mainz 05 iyo Hertha Berlin ee ay Liverpool dheelayso ka hor inta aanay ku laabanin Ingiriiska ayaa la filayaa in uu ku saldhigo Ibrahima Konate.
Laacibkan oo waraysi bixiyey ayaa waxa uu ka hadlay lambarka uu xidhanayo, waxaanu yidhi: “Waa lambar muhiim u ah kooxda, waxaana haystay ciyaartoy weyn aniga hortay, laakiin wax cadaadis ah iguma noqonayo sababtoo ah waxay tahay inaan horumar sameeyo mustaqbalka, waxaanan rajaynayaa in aan wax fiican qaban doono anigoo xidhan lambarkan.”
Ibrahima Konate waxa kale oo uu sharraxaad ka bixiyey naanaysta uu ku faraxsan yahay in loogu yeedho ee ‘Ibou’, waxaanu yidhi: “Iigu yeedha ‘Ibou’ sababtoo ah markii aan yaraa ayay hooyaday mar walba iigu yeedhi jirtay ‘Ibou, Ibou, Ibou.
“Maalintii iigu horreysay ee aan tegay Leipzig waxa ila socotay hooyaday, waxaanay mar walba iigu yeedhaysay ‘Ibou, Ibou, Ibou. Tababare Ralf Ragnick ayaa ku yidhi ‘waa maxay Ibou?’ Kaddib markii ay u sheegtay, qof walba wuxuu iigu yeedhaa Ibou.”